Aher Shelf Corporations enesikweletu Esimisiwe
Umthetho uthi inkampani “ngumuntu” osemthethweni ohlukile kubanikazi bayo. Iminyaka yabanikazi ayihambelani nobudala bezinkampani. Lapho i-HJ Heinz Company ikhangisa ukuthi yasungulwa e-1869, akusho ukuthi bonke abaninimasheya bangaphezulu kweminyaka engu-100. Kusho nje ukuthi inkampani yaqokwa kulowo nyaka. Ungasebenzisa inzuzo yezinzuzo ezifanayo zokukholeka lapho ukhangisa kumakhasimende.
Iminyaka yenkampani yakho inganikeza ukuthembeka okukhulu kumakhasimende nakubabolekisi kunebhizinisi elisungulwe kamuva nje, ikakhulukazi uma ubude besikhathi obusunamabhizinisi busilingana nobudala benkampani oyitholayo. Isibonelo, ake sithi ubusenkampini yokuphaka iminyaka engu-12. Ummeli wakho kanye ne-accountant bancoma ukuthi ufaka ukuvikela isikweletu nokugcina intela. Ngakho-ke, uthola inkampani endala eneminyaka engu-12 ehambelana nesikhathi sesikhathi osenamabhizinisi. Ngale ndlela, lapho ukhangisa ukuthi sekuyiminyaka elishumi ebhizinisini, uma ikhasimende lingaba yinkampani yakho, bazobona ukuthi usuku lwakho lokugcwalisa lwebhizinisi luzohambisana nenani lesikhathi owenze ngalo ibhizinisi ngempela.
Ngokunjalo, ukuthola izinkampani namanye amabhizinisi asebenzayo anezikweletu ezikhona nezinkundla ezikhona zokuthenga ngesikweletu kanye nokwakha isikweletu enkampanini yakho kunganikeza ibhizinisi amandla amakhulu wezezimali. Unesibopho sokuqaphela ukuthi iminyaka yobudala akuyona ukuphela kwesizathu sokuboleka nokuthembeka kwebhizinisi futhi sincoma ukudalulwa okugcwele ngokusho ngosuku oyitholele ngalo inkampani endala.
Sinezinhlelo ezingabizi kakhulu ezingasiza ekutholeni isikweletu sebhizinisi ngokushesha.
Qaphela izinhlangano kulolu suku nobudala abathi ungathola inkampani esivele inemigqa yesikweletu enamathiselwe kuyo. Uma ufuna ukuthola inkampani endala, sinikeze ucingo. Ngemuva kokuthi uyitholile singakusiza wakhe ikhredithi kuyo.
Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikezela izinkampani eziningi ezinjalo nama-LLC. Kunezinkampani eziningi zefishi laseNevada ezindala, izinkampani zakwaDelaware, izinkampani zakwaWyoming, izinkampani ezingasogwini / zomhlaba kanye namaCanada Corporations atholakalayo. Izinkampani ezibaluleke kakhulu ezinjengalezi ezithola ngokushesha nokwakha ibhizinisi zingaba ngamashelufu ezinkampani. Izinkampani zikhona futhi kuleli lizwe esivele zinamaphuzu wokuthenga ngesikweletu ezinkampani futhi sezisungule ubudlelwano nababolekisi, yize lezi zinkampani zihlala zinamabhizinisi asebenzayo.
Izinkampani Incorporate inephakheji ekhethekile efaka inkampani yamashalofu esegugile kanye nohlelo lapho sakha khona isikweletu senkampani ne-Dun & Bradstreet nezinye izinhlangano ezikala isikweletu. Singahlela ukuxhumana nababolekisi abangathi, uma sebevunyiwe, bangasiza ekuhleleni isikweletu ngokwanda kwebhizinisi, izimpahla zebhizinisi, kanye nokuthengwa kwezezakhiwo.
Olunye uhlelo olutholakalayo ukuqeqeshwa kwezakhiwo, ukubonisana kanye nohlelo lokwengezelela ukwengeza isikweletu. Sihlela isazi sokutshala imali esinolwazi esithole imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 1 kwizakhiwo nomhlaba wonke ukuza edolobheni lakho lezinsuku ezimbili kuya kwezintathu siphinde sinikeze nohlelo lokuqeqeshwa olunzulu. Lokhu kufaka hlaziya ukuhlaziya izakhiwo, ukunikela ngezakhiwo, uma kungabekwa imali efanelekile, futhi kukhombisa ukuthi imali ingaxhaswa kanjani ngemali encane ngangokunokwenzeka kuthengiselana.
Isihloko sangaphambilini kuleli khasi, sibhekise ezinkampanini zamashalofu ezindala ezinamakhadi wesikweletu asemthethweni kanye nesikweletu esele sikhona sibekelwe izinhloso ze-SEO ngoba ucwaningo lwethu luveze ukuthi kukhona ukusesha okuningi kwalelo gama. Sisanda kushintsha isihloko sibonisa kakhulu isihloko sekhasi. Qaphela: Uhlelo okuxoxwe ngalo ngezansi alusatholakali futhi futhi lusetshenziselwa ukuthola ireferensi kuphela.
Inkampani yethu Edala Yobudala ngePhakethe Losizo Lwezikweletu ifaka izinto ezilandelayo:
Siza ekutholeni isikweletu se-Real Estate, imvamisa kuze kube $ 1 izigidi eziphezulu - Uzothola inkampani noma i-LLC. Uhambisa iziphakamiso zokuthengiswa kwezezakhiwo ukuze uxhaswe ngemali. Ungakwazi, ngokuya ngemvume yokubolekwa kwemali, uthole imali efinyelela ku- $ 1 million esikweletini esivikelekile semalimboleko wobambiso lwesakhiwo sokuqala. Futhi, sinobudlelwano nababolekisi abaningi abazimele abazimisele ukubolekisa ezinkampanini kanye nakubantu. Njengokulindelekile, obolekayo uzodinga kuqala ukuqinisekisa ukuthi inani lempahla lizosekela inani lemalimboleko nokuthi imali mboleko iphephile kumbolekisi ngokubhala okuvunyiwe ngaphambi kokuthenga ngakunye. Njengoba noma yimuphi umuntu onengqondo angaqonda, ukuba nenhlangano noma i-LLC, ngokwayo, akumenzi umuntu akwazi ukungena esikhungweni sezezimali futhi akhokhelwe izikweletu zedola. Ngakho-ke, abaqeqeshi bethu bavele bakufundise ukuthi ungatshala imali kwezindlu nomhlaba nokuthi ungabamba kanjani ubunikazi bempahla ngegama lakho lenkampani. Inethiwekhi yethu kanye nalabo esizihlanganisa nabo bahlelele izigidi zamadola ukuxhasa ngezimali amaklayenti. Asibona ababambisi bempahla engabambisani, ngakho-ke asenzi imali ekhokhwa kwimalimboleko. Simane sisize ukuhlela ukubolekwa kwemali bese sikudlulisela kubabolekisi abafanele. Noma kunjalo, ngokweqiniso, AKEKHO GUARANTEE UKUTHI YILUPHI INDLELA YOKUQINISEKISA EZIQHAWULAYO ​​EZOTHOLWA. UKUSUSWA KWE-CREDIT KUTHOLAKALA UKUVUNYWA KOKUVIKELWA KWEMALI NGOKUKHANYA NGUMLANDISI (S).
Ukuqeqeshwa Komuntu Onke Sithumela isazi esithole imali engaphezu kwe- $ 1,000,000 kwezindawo ezithengiswayo edolobheni lakho ukuniqeqesha sendlela yokuthola isikweletu sendawo nokuthi ungayikhulisa kanjani imbuyiselo yakho lapho utshala imali ethengiswayo. Lokhu ukuqeqeshwa kwezinsuku ezimbili kuya kwezintathu. Lokhu akuyona ukuqeqeshwa ekilasini. Lokhu kungukukodwa kwe-1-on1 izandla, ukuqeqeshwa kobuso nobuso edolobheni lakho. Umqeqeshi uzobheka izakhiwo nawe, azokukhombisa ukuthi angafaka kanjani umnikelo ndawonye, ​​imvamisa engenamali yokuphuma ephaketheni lakho, nokuthi wenza imali eningi kakhulu ukutshala imali ethengiswayo. Abaphathi beCompanies Incorporate bebelokhu benikeza lolu hlelo lokuqeqeshwa kusukela nge1994. Sikholwa ukuthi cishe wonke amaklayenti abambe iqhaza kuqeqesho lukano-on-one waneliseke kakhulu. Noma ngabe ungumtshalizimali omusha noma onolwazi ngezindlu, sinethemba lokuthi uzokweneliseka kakhulu ngalokhu kuqeqeshwa kukodwa. Uzomboza izindleko zokuhamba zomqeqeshi. Isizathu salokhu ukuthi noma ngabe umqeqeshi udinga ukuhamba ngaphesheya komgwaqo noma ahambe ezweni lonke, sifuna ukuqiniseka ukuthi unezindleko eziphansi futhi asifuni ukumaka izindleko zawo wonke umuntu ngoba izindleko zokuhamba ziyehluka. Izindleko ezijwayelekile zingaba ngamakhulu ayisithupha amathikithi ohambo oluyindilinga namakhulu amabili ngosuku ehhotela nokudla. Ngakho-ke, izindleko zincane kakhulu.
Imigqa eyengeziwe Yezikweletu Yokuthengwa Kwezakhiwo Nezindlu - Umqeqeshi wokwakha izikweletu ezinkampani, ozosebenza nawe ukwakha umbiko wakho wokuthenga ngesikweletu, kufaka phakathi uhlelo oluhlelekile nensiza yamahhala yokuxhaswa. Umqeqeshi wakho sizosebenza nawe ukuze ukwazi ukusebenzisa nokwakha isikweletu esengeziwe ngezidingo zakho bese uthola isikweletu se-Dun & Bradstreet kuncike ekubambeni iqhaza kwakho kule nqubo.
Bona uhlu lwethu olutholakalayo izinkampani ezindala lapha.
Ngemuva kokuthi umbolekisi aqinisekise inani lempahla ethola imalimboleko, futhi evume ukuthengiselana ngenqubo yokubhala esejwayelekile nokuphepha okwanele kokubolekwa kwemali, kuze kube yizigidi eziyizigidi ezingama- $ 1 kuzothunyelwa ku-escrow kwisivumelwano ngokuthengwa kwendawo ethengiswayo noma ezinye izinto ezivikelwe. Futhi, lesi akusona isiqinisekiso. Izimali zihanjiswa kuphela ngemuva kokuthi obolekisile evumile ukuxhasa ngemali ukuthenga okuthile.
Isikweletu siyatholakala futhi nezinhlobonhlobo zemishini yebhizinisi, izimoto nezinye izinto ezingenzelwe kahle izidingo zakho, kuncike ekuvunyelweni kwababolekisi, ezingatholakala njengengxenye yohlelo lokuqeqesha izikweletu lwenkampani.
Imali yezezakhiwo itholakala yendawo yokuhlala, yokuhweba, yomhlaba noma enye impahla ethengiswayo kanye nezinye izakhiwo eziphephile noma okokusebenza.
Umqeqeshi wakho uzokukhombisa ukuthi ungalungisa kanjani izinhlinzeko ezamukelekayo zokuthenga impahla usebenzisa isikweletu sebhizinisi. Umqeqeshi uzokukhombisa nokuthi ungalungisa kanjani izinhlinzeko ezingadingi ukukhokhwa kwemali.
Ngabe inkampani noma i-LLC izoba nenombolo ye-Dun & Bradstreet (D & B) kanye ne- "Paydex®"?
Yebo. Inombolo ye-AD ne-B, ukuhanjiswa kwamaphuzu we-Paydex nohlelo lokwakhiwa kwezikweletu oluyingxenye yohlelo lokusekelwa olusezingeni eliphezulu lokuxhaswa kwezikweletu. Uzonikezwa umqeqeshi wezezikweletu inkampani ezokwenza umsebenzi omningi kuhlelo lokwakha isikweletu.
Ngingakwazi ukusebenzisa imali nganoma iyiphi indlela engifuna ukuyisebenzisa?
Kuya ngokuthi ufunani. Uma okwenziwayo kwenza umqondo webhizinisi kini nobabo obolekayo futhi kungaphansi kwemingcele yokuphepha efanele, yebo. Imali izosetshenziswa, kuncike ekuvunyelweni kwababolekisi, ukungena escrow ukuthenga izinto ezinjengokuthengiswa kwezakhiwo noma ukukhokhela inkampani noma i-LLC lapho uthenga khona ezinye izinto. Umbolekisi unokuguquguquka okukhulu kepha akekho umbolekisi ophumelelayo ozofaka amafayili ayisigidi ku-akhawunti yakho ngaphandle kokuthatha kuqala isiqiniseko sokuthi kunani elanele lokuvikela imalimboleko ngaphezu kokuhlaziya eminye imikhakha yokuphepha. Bonke noma cishe bonke abathengi abaye balandela imiyalo efundiswe ekuqeqeshweni okukodwa futhi balandela izeluleko bakwazile ukuthola uhlobo oluthile lokuxhaswa ngezimali.
Ngingaboleka imali ngaphandle kokusebenzisa isikweletu sami?
Yebo. Isikweletu esivikelekile sendawo ethengiswayo ngokwesiko besitholakala ngesikweletu sebhizinisi se100% ngaphandle kwezikweletu zomuntu siqu, ngokuya ngezidingo zombolekisi. Ngenye indlela, umbhali wasemibhalo engezansi angakufaka amandla enkampani namandla akho wokuqinisa amandla akho okuboleka. Ngokwemvelo, lokhu kungaphansi kokuphepha kwemalimboleko obolekisayo. Ezikhathini zamuva, ababolekisi abaningi babheka imingcele ngaphandle kwesikweletu sebhizinisi. Ngakho-ke, kuya ngombolekisi.
Emhlabeni ungakwenza kanjani lokhu ngemakethe yesikweletu yanamuhla eqinile?
Sinababolekisi abenze, iminyaka eminingi, bakhe amanethiwekhi wabatshalizimali abazimele abatshala imali kubambiso lwezindlu. Ngakho-ke, kunokuba sisebenzisane namabhange, ababolekisi bethu baxhasa ukusatshalaliswa kwemali yesikweletu kusuka kwenethiwekhi yayo enkulu yabatshalizimali abazimele. Futhi, sisiza ekuhleleni imali mboleko futhi sidlulisele ababolekisi kuphela njengensizakalo kuwe. Asitholi imishini evela kwizimali mboleko.
Ngingakwazi ukusebenzisa isikweletu sebhizinisi ukuthenga i-Corporate noma i-LLC, uhlelo lwesikweletu noma ukuqeqeshwa kwezezakhiwo kuwe?
Cha. Kufanele uthenge i-Corporate Corporate noma i-LLC, umakhi wesikweletu kanye / noma uhlelo lokuqeqesha ngemali yakho.
Ngingafaka enye imali ephaketheni lami?
Kunezindlela zokuhlela ukuthengiselana kwezezakhiwo ukuze lapho ukuthengiswa kwempahla kuvalwa, uyakwazi ukuthola imali ebuyiselwe ephaketheni lakho ekuthengeni impahla, noma lokhu kungaqinisekisiwe. Izindlela ezisetshenzisiwe zizofundiswa esifundweni sokuqeqesha.
Ngubani ovuma ukubolekwa kwempahla kanye nokuthengiswa komhlaba noma okunye okuthengiwe?
Izifundo zizokukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani okunikezwayo okwamukelekayo bese umbolekisi evuma ukuthengiselana ngemali.
Ingabe unginikeza imali engithengiwe engingayithenga ngisebenzisa isikweletu sebhizinisi?
Ngenkathi ungasebenzisa imali ukuthenga noma yiluphi ucezu olwamukelekayo lwezezakhiwo, ukutshalwa kwezimali okuye kwahlolwa kuqala ngumfundisi walesi sifundo kuvame ukutholakala uma kufiswa. Lokhu kunjengokwenzelwa kuphela futhi, awudingekayo ukuthenga lezi zakhiwo. Ungasebenzisa imali ukuthenga ezinye izakhiwo ozithola ngaphandle kwalezo ezinikezwe esifundweni.
Hlobo luni lwezinto ezithengiswayo engingaluthenga?
Indawo yokuhlala, umndeni ongashadile, imindeni eminingi, ezentengiso, ukubikezela kwangaphambili, umhlaba ongavuthiwe, umndeni owodwa, ukubikezela kwangaphambili, ukuthuthuka, ukuvuselelwa kabusha kubandakanya izinto ezihambisana nazo nezindleko zabasebenzi. Imininingwane ifundiswa enkambweni yokuqeqeshwa.
Ngingathola imali ye100% ngaphandle kokukhipha imali ephaketheni lami?
Yebo. Izindlela i-100% ezakhiwe ngayo imali zifundiswa esifundweni sokuqeqesha. Ezinye izindlela zifundiswa lapho kudingeka inkokhelo encane, kungaba kuwe noma komunye wabangane bakho.
Ngingathola ngaphezulu kwesikweletu se- $ 1 million?
Isilinganiso sokuqala ngaphansi kohlelo lwethu senzelwe ama- $ 1 wezigidi, ngokuya ngokubuyekezwa kwenani lezinto ezisetshenziswayo kanye nezinqubo zokubhala zababolekisi. Ngokulandela ukuqeqeshwa ungafunda ukuthi ungayandisa kanjani imali ongayiboleka.
Ayini amanani enzalo?
Yimpendulo efanayo uma umuntu engakubuza, “Kubiza malini imoto?” Kuya ngokuthi. Kuya ngamanani wenzalo emakethe nobungozi bemalimboleko. Mayelana nalokhu kubhalwa, imali mboleko ebeka engcupheni encane, lapho inkampani noma i-LLC izosetshenziselwa ukukusiza ukuthenga ikhaya lapho uzohlala khona, amanani wenzalo yi-5-8%. Imalimboleko yobungozi obuphakathi, efana nemali yesikhashana yesikhashana yokuvuselela ingu-9-12%. Imalimboleko enkulu ebekiwe ingaba ngamaphesenti ayishumi nantathu kuya kwamashumi amabili nane. Ingozi enkulu ingaba yindawo eseduze nezindawo ezinobungozi noma yokwakha isikhathi esifushane esiyingozi. Futhi kuya ngesimo lapho impahla ethola imalimboleko itholakala khona ngoba kunezidingo ezihlukile zamazinga emali yenzalo ezifundazweni ezihlukile. Izinombolo ezingenhla ziyizibonelo. Ngenxa yokuhluka kwesilinganiso senzuzo ngokuhamba kwesikhathi nezinye izinto asenzi zethembiso kulokho kuzokhokhiswa amanani aboleka inzalo yethu ngokuzayo.
Ngingakwazi ukusebenzisa isikweletu ukucubungula kabusha impahla engiyikimi manje?
Yebo, lokhu kuyatholakala.
Ngingakwazi ukwakha isikweletu enhlanganweni noma ku-LLC esengivele ngiyiphethe?
Yebo, sinikezela ngohlelo lapho lokhu kungenzeka khona kepha kungathatha isikhathi eside ukwedlula futhi kungabiza cishe okufana nokuthenga inkampani noma i-LLC enemigqa yesikweletu.
Ungafakazela ukuthi ezinye izinkampani noma ama-LLC avunyelwe isikweletu?
Yebo. Kungafakazelwa ukuthi ukusatshalaliswa kwemali mboleko engamakhulu ambalwa kwenziwa kumakhasimende ababolekisi. Sithole izincwadi ezivela ezikhungweni ezibolekisayo ezivumile ukukhokha ngesikweletu ngokuya ngeziphakamiso zoxhaso lwezezakhiwo nomhlaba ezisebenzisa inqubo yazo yokubhala. Umbolekisi kanye nenethiwekhi yakhe yemithombo yezimali izosebenza ukuthola amanani afunekayo. Yize inani selisunguliwe, ngokwemvelo, obolekayo kuzodingeka aqiniseke ukuthi inani lesakhiwo lizosekela imalimboleko nokuthi imalimboleko iphephile kumbolekisi.
Ingabe unawo amanye amakhasimende akwenzile lokhu ngempumelelo?
Yebo. Elinye lamaklayenti ethu eSpokane, eWashington aqale ngokungasho lutho futhi asitshele ukuthi wakhe i-net 6 million net ngokulandela uqeqesho. Amanye amaklayenti amabili eFlorida akhombise ukuthi athenge i $ 450,000 kumishini yebhizinisi ezinyangeni ezimbili zokuqala. Elinye iklayenti lalingamaphoyisa futhi laba ngabatshalizimali kwezindlu. Elinye iklayenti lazuza kakhulu emisebenzini yakhe yokutshala imali yendawo ayisebenzayo kunangesikhathi ayenayo emsebenzini wakhe. Ngokwemvelo, imiphumela iyahluka. Uhlelo luzosebenza kuphela uma wenza… bese ulandela uqeqesho.
Amaphesenti amangaki abantu aphumelele?
Sitshelwa ngomunye wabaqeqeshi bezifundo ukuthi ama-87.3% wamakhasimende asehlelile ezinhlelweni zokuzibandakanya enza umsebenzi owodwa wokuthengiswa kwezindlu. Abantu abambalwa abasele kungenzeka ukuthi basezinhlelweni zokuthola amadili noma abenzanga mzamo odingekayo njengoba kufundiswe esifundweni.
Yebo. Siqale ukwenza ibhizinisi e-1906 futhi sizibophezele ngokuphelele empumelelweni yakho. Sinesikhuthazo esinamandla sokuthi uphumelele ngenxa yezizathu ezintathu. I-1. Ukunakekela amakhasimende ethu kuyinto efanelekile. I-2. Kuyakha umqondo webhizinisi kithi ngoba iningi lebhizinisi lethu lisebenza ngokuthumela umyalezo kumakhasimende ajabule. I-3. Lapho ujabule uzoba maningi amathuba okuba ikhasimende eliphindaphindayo. Umgomo wethu ukwanelisa izidingo zakho nokuba nobudlelwano besikhathi eside nawe. Kungakho sidalula ngokuphelele ukuthi imali engaphansi kwesiboleke omunye wababolekisi bethu abahambisana nokuvuma ukuthengiselana ngakunye futhi asiqinisekisi ukuthi kuzokhokhwa imali ekuthengeni okuthile.
Isibonelo Esikhona Seklayenti Elikhona
Sicela uchofoze isixhumanisi ukuze uthole isibonelo sangempela sendlela eyodwa yamaklayenti ethu amaningi asebenzisa ngayo elinye lakhe Ama-Shelf Corporations anesikweletu kanye / noma izinkampani ezisanda kwakhiwa ukuze zithole ngaphezulu kwe- $ 300,000 ngenzuzo ekuthengeni kwakhe kokuqala.
Yini Engizoyifunda Kukhosi Yokuqeqesha Ehlanganiswa Nenkampani?
ISherf Corporation Ngezifundo Zesikweletu
Ngabe unobufakazi obuvela kumaklayenti akhona?
Yebo, sicela uchofoze ividiyo engezansi futhi uzobona abafundi (abafundi) bangempela abake basebenzise uhlelo lwesikweletu kanye nabafundi abake bafika ezifundweni. Le yividiyo efanayo okungenzeka ukuthi uke wayibona ngokuchofoza isixhumanisi esingenhla bese uskrolela phansi kusigaba sobufakazi.
Nginempahla ethile engifuna ukuyithenga. Ngabe uhlelo lwakho luzosebenzela lona?
Cishe noma yikuphi ukuthengiselana kwezezakhiwo kungasekelwa ngalolu hlelo uma kunokuphepha okwanele ukusekela imalimboleko futhi kuhlangabezana nezidingo zombolekisi. Elinye lamaphutha amakhulu umtshali zimpahla angawenza, noma kunjalo, wukuthandana nothando lomhlaba owodwa. Abatshalizimali abaningi abaphumelela kakhulu bezakhiwo benza okunikezwayo eziningana masonto onke.
Lokho uhlelo lwethu olungakwenza ukukutshela uma amadili onawo engqondweni noma engasizuzi kuwe. Umeluleki onolwazi kakhulu oza nohlelo uzokusiza ekuhleleni okuhle kokuthengiswayo okungalungile kangako. Ngaphezu kwalokho, inkambo yokuqeqesha ikutshela ukuthi ungakuthola kuphi ukuthengiselana okunenzuzo kakhulu nokuthi ungakuhlelela kahle okunikezwayo.
Amakhasimende anolwazi futhi asemasha kakhulu njalo athi athokozela usizo olukhulu ngokuqeqeshwa nangokubonisana. Siphakamisa ukuthi ubuke izifundo zokuqeqesha ama-DVD noma uye ezifundweni ezibukhoma ngaphambi kokusebenzisa isikhathi sakho sokubonisana ukuze wena nomeluleki wakho nizokwazi ukuba ekhasini elifanayo.
Umehluko phakathi kwalokhu nentambo yendabuko yesikweletu imi ngale ndlela elandelayo: Ngomugqa wendabuko wesikweletu, ihlaziya nokuhlaziywa kokuphepha kwemalimboleko kwenziwa ngaphambi kokuba umugqa wesikweletu unikezwe. Kodwa-ke, ngalolu hlelo, njengoba impahla ithunyelwa kumbolekisi ngemuva kokulethwa kwesikweletu esinemibandela, ukuhlolwa nokuhlolwa kokuphepha kwemalimboleko kwenziwa ngemuva kwalokho ingxenye yesikweletu etholakalayo yabelwa iphrojekthi ethile uma futhi noma lapho ihlolwa futhi Ukuhlaziywa kokuphepha kwemalimboleko kuyathandeka kumbolekisi.
Ngabe imali yami yesikweletu eqondene nami izobandakanyeka?
Isikweletu sakho siqu akuyona ingxenye yenqubo yokuvuma. Uma umbhali wangaphansi angayicela, ingahle noma ingabi yiningi kangako ngezinhloso zokufanelekela imalimboleko njengoba kungukuqinisekisa ubuqotho bomuntu olawula inhlangano noma i-LLC. Ngamanye amagama, uma umongameli noma umphathi wenhlangano noma i-LLC enesikweletu esibi akusho ukuthi lokho kwenza ukuthi imalimboleko ivunyelwe, kuya ngezidingo zombolekisi. Kodwa-ke, uma umuntu olawula inhlangano noma i-LLC enephethini eliqhubekayo lomsebenzi wokukhohlisa oholele ekutheni kube nezinqumo zokukhwabanisa kumbiko wesikweletu, kungaba yindaba yokwethembeka. Ngakho-ke, isikweletu esibi esibi kungenzeka noma singenaso isisindo esiningi, kuya ngezidingo zombolekisi, kepha ukuntula kokungathembeki kwenza. Ezikhathini zamuva nje ababolekisi bakhathazekile kakhulu ngesikweletu somnikazi wenhlangano kunaleso ababesenzile esikhathini esedlule.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola umsebenzi uxhaswa ngemali?
Ngemuva nje kokuba umbolekisi enelisekile ukuthi kunokuphepha okwanele kwemalimboleko futhi obolekayo uzimisele ukuxhasa lokho kuthengiselana. Asenzi zethembiso ngesikhathi esizothatha isikhathi sokuvala imalimboleko, noma kunjalo, imalimboleko ivame ukuvala ngokushesha kunabolekisi bendabuko. Isikhathi esanele siyadingeka ukuhlaziya okwenziwayo ngokuphepha kwababolekisi. Khumbula ukuzinika isikhathi esanele ukuze obolekayo enze intshiseko efanele edingekayo. Umbolekisi ngeke adlule izinqubo ezidingekayo zokuphepha kwimalimboleko ngoba ushesha. Ngeke zidedele ukubhala ngoba uzolahlekelwa ukuthengiselana uma zingakuxhasi ngemali yakho. Ngeke zidlule imihlahlandlela yezokuphepha ngoba uzolahlekelwa yimali oyisebenzisele imali eqotho, ama-appraisals noma ezinye izinto. Bazoyikhokhela lapho benelisekile ngokuphepha kwemalimboleko nalapho umbolekisi enelisekile ukuthi kuphephile ukukhokhela okwenziwayo. Ngakho-ke zinike isikhathi esanele sokuvala ukuze uvumele lesi sidingo.
Nasi isibonelo sempahla leyo
ixhaswe nje elinye lamakhasimende ethu.
Kwenziwa kwenziwa lapho
isikweletu senkampani sinikeza ukheshi ngempahla yokuqala.
Umthengisi waleso sakhiwo uphindisela imalimboleko yesibili. (Singakunika izivumelwano eziyisibonelo ezibonisa ukuthi ungakwenza kanjani lokho kunikezwa uma ubhalisa kuhlelo lwethu.)
Imalimboleko yokuqala yemalimboleko yayiyi-50% yentengo yokuthenga. (Kufika ku-80% yenani elingasekelwa ngezimali ngaphansi kwezimo ezifanele futhi uma obolekayo ezwa ukuthi imboleko iphephile.)
Imalimboleko yesibili yemalimboleko ekhokhwa kumthengisi enye i-50% yentengo yokuthenga.
Ikhasimende elikweletayo izikweletu likwazi ukuthenga le ndawo ngemali encane ngaphandle kwemali
Nasi isibonelo sendali ethengiswayo
Intengo yokuthenga $ 500,000
Iklayenti lifuna ukuboleka
i $ 500,000 ephelele
Iklayenti lifuna futhi
uboleke i- $ 150,000 ukulungisa impahla.
Ngakho-ke, iklayenti lifuna ukuboleka
I- $ 650,000 ngentengo yokuthenga engu- $ 500,000.
Iklayenti lisho impahla
"ibaluleke" $ 1 million. Indawo ingabiza u- $ 1 wezigidi. Kepha
ama-appraisals enziwa ngamanani angempela hhayi ukuthi amanani “kufanele” abe. Ngakho-ke, ngalokhu kuthenga, manje sesine
iqhathaniswa ne- $ 500,000 esigcawini ezimake ngayo ezinye izakhiwo ku
indawo izovunywa. Yize thina, njengabatshalizimali, singaphikisana naleli phuzu
kuze kube yilapho siluhlaza okwesibhakabhaka ebusweni, ababolekisi bavame ukwenza imalimboleko esekwe ngaphansi
inani lentengo ehlolwe noma intengo engasetshenziswa yokuthenga futhi hhayi kulokho esicabanga ukuthi intengo yokuthenga ingaba noma kufanele ibe. Hhayi ukuthi akukho okuhlukile
kulo mthetho; kodwa lindela ukuthi lo mthetho ulandelwe ngumbolekisi iningi
Ukuqinisekiswa Okuthuthukile - Uma kukhangisa, ukwethenjwa kwamakhasimende kuyathuthuka lapho izitatimende ezinjengokuthi "Inkampani yethu ibilokhu ikhona kusukela lapho ..." Lokhu kubaluleke kakhulu lapho empeleni uhlanganyele ebhizinisini embonini ethile esikhathini esithile esibekiwe esikhundleni senombolo iminyaka inkampani ibe iseshalofini.
Ikhredithi Yezinkampani - Ngezinye izikhathi kungaba lula lapho kusungulwa isikweletu ngamabhange, abahlinzeki, abatshalizimali kanye nongxowankulu abamba iqhaza ukuze babe nenkampani endala. Noma lokhu kungaba yinto encane phakathi kwezinye, izici ezibaluleke kakhulu, njengokukhokha isikweletu nokwenza inzuzo. Njenganoma yiliphi ibhizinisi elisanda kutholwa, sincoma ukudalulwa okugcwele ukuthi usanda kuthola ibhizinisi elidala.
Izinkampani Ezihlanganisiwe zinohlu lwezinkampani ezisunguliwe ezitholakala ngokuthenga ngokushesha. Izinkampani zithengiswa kuqala. Kukhona izinkampani ezitholakalayo ezisungule ama-akhawunti asebhange kanye nezentambo zesikweletu. Singaba noma sinazo izinkampani ezinjalo. Izinkampani azikhululekile enkokhisweni yentela noma engokomthetho. Ukuhluka okukodwa kungafaka izinkampani zaseCalifornia lapho kufanele kubhadale khona imali yaminyaka yonke yokuhlawulisa.
Umqeqetshi wesifundo sezezindlu uthengisa inqwaba yamakhasimende abandakanyeka ekuthengiselweni kwezezakhiwo okuningana noma okuningana kusetshenziswa izinkampani zabo ezazitholwe ngensizakalo yethu. Enye yezingxenye ezinkulu zohlelo yimfundo. Sinikeza inkampani noma i-LLC kanye nokuqeqeshwa kokuthi singayisebenzisa kanjani ukuthenga izakhiwo. Uhlelo lwethu luhlukile futhi, kulwazi lwethu, uhlelo olufanayo alunikezwa yinhlangano ethile.
Kukhona izindleko esizitholela wena uma sikunikeza ngenhlangano noma nge-LLC kanye nokuqeqeshwa nokubonisana okuhlangene. Ngoba lezi zindleko azitholakali ngathi ziyizinto ezingabuyiswa. Ukufeza ezinye zezicelo zokubolekwa, imalimboleko yakho ingathunyelwa kubantu besithathu. Imalimboleko egcwaliswe ngeqembu lesithathu ingahle noma ingadingi ukusetshenziswa kwenkampani ethengwa ngalolu hlelo. Sizolwela ukwanelisa izidingo zakho ngangokusemandleni ethu ngaphakathi kohlelo lwethu.
Izinkampani Ezihlanganiswe nazo zinganikela ngehhovisi elibonakalayo esifundazweni sase-US kanye nezindawo eziningi zangaphandle kubandakanya ikheli elinokuthumela imeyili, inombolo yocingo nenombolo yefeksi. Lokhu kwenzelwa abantu abafuna ukuqhuba ibhizinisi kepha abangafuni ukusebenzisa amakheli abo ekhaya labo.
Futhi singasungula i-akhawunti yasebhange yase-US noma ye-offshore yenhlangano yakho noma ye-LLC. Uzoba nokufinyelela ku-inthanethi ku-akhawunti yakho kanye nekhadi lokudonswa kwemali. Ngamanani amancane emali, uzosebenzisa ikhadi lakho lasebhange ukuthenga. Ngamanani amakhulu, uzosebenzisa insiza ye-inthanethi yasebhange nemali ye-waya kulabo ofuna ukuthenga kubo. Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikezela ngencwadi edingekayo "Ekulungele Isingeniso" emabhange ukuze i-akhawunti yakho isungulwe ngaphandle kwakho. Ngokwemvelo, sincoma ukuhambisana okugcwele kwezomthetho nezeluleko zomthetho nezentela ngummeli kanye ne-accountant.
Izinkampani Ezihlanganisiwe zivame ukubuyekezwa futhi zivakashele ukubhengeza okuhle kakhulu kwendawo nangaphesheya kwezilwandle kanye nemithetho yokuhlanganisa. Sinobudlelwano namabhange emhlabeni jikelele futhi singakwazi ukwenza uhlelo oluvumelana kangcono nezidingo zakho ngamunye. Amanani entengo yempahla yangempela nezinhlelo zokubolekwa kwezezakhiwo ahamba ngamabhayisekili ngokwemvelo. Ngakho-ke, njengeklayenti uyaqonda futhi uyavuma ukuthi uhlelo lwethu lungashintsha ngaphandle kokuqaphela. Sinikezela ngomsebenzi ngaphansi kwalolu hlelo unyaka owodwa ngokuqokwa, njengoba kutholakala, ngesisekelo.
Uku-oda i Inhlangano Yabadala or IShelf Corporation (okubizwa nangokuthi amashalofu izidumbu ngesikweletu esisunguliwe or amashalofu izidumbu ngesikweletu Uhlelo noma amashalofu izidumbu ezinemigqa yesikweletu or izinkampani ezindala ezinamaPaydex ezisunguliwe TM Izikolo), ngicela ushayele 1-888-444-4412, noma emhlabeni jikelele ku- + 1-661-310-2688 futhi ukhulume nomunye wochwepheshe bethu abazokusiza ngentokozo. Sicela ushayele uMsombuluko kuze kube uLwesihlanu phakathi kwamahora we-7: 00 AM ne-5: 00 PM Pacific Isikhathi.